गोदावरीका वडैपिच्छे अवैध प्लटिङ | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति ५ फाल्गुन २०७६, सोमबार ०८:०६ लेखक नेपाली जनता
ललितपुर । गोदावरी नगरपालिकाको वडैपिच्छे अवैध रूपमा प्लटिङ भइरहे पनि यसलाई रोक्न नगरपालिकाले चासो देखाएको छैन । खेतीयोग्य जमिन मात्रै होइन भिराला पाखा, वन क्षेत्रसमेत मासेर प्लटिङ हुँदा स्थानीयवासी पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ४, ८, ९, १०, १३ र १४ मा यस्तो अवैध तरिकाले प्लटिङको क्रम बढेको हो ।
नगरपालिकाका वन तथा वातावरण समिति संयोजक मुकुन्द पहरी अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको प्लटिङले भूक्षय र बाढीको जोखिम बढेको बताउँछन् । नगरपालिकाले प्लटिङलाई स्वीकृति नदिए पनि मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेर प्लटिङवालाहरूले कित्ताकाट गर्ने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाका प्रवक्ता मिलन सिलवालले भने, ‘हामीले स्वीकृति नदिए पनि मालपोत कार्यालयले कित्ताकाट गर्दा खुलमखुला प्लटिङ भइरहेको हो ।’ संयोजक पहरीका अनुसार संघ र प्रदेशको प्लटिङसम्बन्धी प्रस्ट कानुन नबनेका कारण पनि भूखण्डीकरण रोक्न नसकिएको हो । उनले भने, ‘संघ र प्रदेशको कानुन नबन्दा अवैध प्लटिङ रोक्न नसकिएको हो । कानुन आएपछि त्यसअनुसार स्थानीय कानुन र कार्ययोजना बनाएर प्लटिङ पूर्ण बन्द गर्ने प्रक्रियामा जान्छौँ ।’
बस्तीमा क्षति पुगे प्लटिङवालाले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ : नगरपालिका
भूखण्डीकरणका कारण बस्तीमा बाढी वा पहिरोले क्षति पु-याए सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति प्लटिङवालाले नै तिर्नुपर्ने गरी नगरपालिकाले योजना बनाइरहेको जनाएको छ । पहरीले भने, ‘भूखण्डीकरणले गर्दा बाढी, पहिरोजस्ता विपद् परे भूखण्डीकरण गर्नेलाई नै क्षतिपूर्ति तिराउनेछौँ ।’ केही वर्षअघिदेखि नै यस क्षेत्रमा अवैध प्लटिङ भइरहे पनि स्थानीय सरकारले पनि रोक्न सकेको छैन । स्थानीयको गुनासो बढ्दै गएपछि केही दिनअघि प्रदेश सभा सदस्य लालकुमारी पुन नेतृत्वको टोलीले अनुगमन गरी मूलपानी क्षेत्रमा अवैध भूखण्डीकरण रोकिएको छ ।
जथाभावी वन कटान गर्दै प्लटिङ भए पनि जिल्ला वन कार्यालय, नगरपालिकाले कुनै कारबाही नगरेकामा स्थानीय असन्तुष्ट छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवैध प्लटिङको विषयमा पत्र काटेर प्रहरी र नगरपालिकालाई रोक्न साथै भूमाफियालाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
अंशबन्डा भन्दै जग्गा प्लटिङ
संयोजक पहरीका अनुसार सरकारले जग्गा प्लटिङमा रोक लगाएको छ । यही कारण जग्गाधनीबाट सीधै अंशबन्डाको बहानामा अंशियारलाई नै कित्ताकाट गर्दै प्लटिङ हुन्छ । यसो हुँदा प्लटिङ कसले गरेको भन्ने नखुल्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय पनि प्लटिङवालाको परिचय खुलाउन डराउँछन् ।
प्लटिङ रोक्न निर्देशन दिइसकेका छौँ : भागीरथ पाण्डेय, सिडिओ, ललितपुर
नगरपालिका र प्रहरीलाई पत्र काटेर कानुनले स्वीकृति दिएको भन्दाबाहेकका प्लटिङ रोक्न भनिसकेका छौँ । पत्रमा गोदावरी नगरपालिकालाई अनुमति दिएको हो कि होइन ? यदि हो भने के आधारमा हो, आधार पेस गर्न भनेका छौँ । प्रहरीलाई त्यस विषयबारे अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइसकेका छौँ ।
प्लटिङ रोक्न संघीय सरकारको प्रस्ट नीति आवश्यक : मिलन सिलवाल, प्रवक्ता, गोदावरी नगरपालिका
माथिल्ला सरकारहरूको नीति प्रस्ट हुनुप¥यो । साथै, मालपोत कार्यालयले पनि प्लटिङका लागि कित्ताकाट गर्नुभएन । यो स्थितिमा मात्र प्लटिङ रोकिन्छ, जसले गर्दा भूक्षयको जोखिम हुँदैन । हामी बोर्ड बैठकमा अवैध भूखण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने विषयमा छलफल गर्छौँ । हामीले डोजर लगाउन पनि कडाइ गरेका छौँ । बोर्डको निर्णयअनुसार डोजर लगाउँदासम्म भूक्षय नहुने गरी र अन्य असर नगर्ने गरी डोजरसम्म लगाउने अनुमति दिएका छौँ । नगरपालिकाले व्यक्तिगत घर बनाउने सन्दर्भमा माटो खन्न स्वीकृति दिएको छ ।@nayapatrikadaily
हतियार भण्डार केन्द्रमा विस्फोट हुदा ३९ सर्वसाधारणको मृत्यु
काठमाडौं । सिरियाको एक हतियार भण्डारण केन्द्रमा विस्फोट हुँदा ३९ जनाको ज्यान गएको छ । उत्तरपश्चिममा अवस्थित प्रान्त इदलिवमा…
प्रहरीमा सिन्डिकेटधारीले प्रभाव जमाउने खतरा
काठमाडौं । कञ्चनपुरमा बलात्कृत भई मृत्यु भएकी १३ वर्षिय बालिका निर्मला पन्तको अनुसन्धानमा प्रहरीले सम्पूर्ण संयन्त्रको परिचालन गरेको छ…
उपभोक्ता समितिको बदमासी: काम लिँदै, ठेकदारलाई दिँदै
काठमाडौं । उपभोक्ता समितिको नाममा करोडौंका योजनाहरू कानुनविपरीत ठेकदारलाई दिने गरेको खुलासा भएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, ०६४…
विवादास्पद विदेशी कम्पनीलाई ७८ करोडको ठेक्का दिइयो
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ७८ करोड लागत भएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली स्थापना गर्न विवादित मलेसियन…
सानो गल्तीले वृद्धलाई हैरानी !
कतिपय अवस्थामा हामीले साना गल्तीलाई नकार्ने गर्छौं र त्यस्ता गल्ती गम्भीरतापूर्वक लिइँदैन पनि । तर कहिलेकाहीं त्यही सानो गल्ती…
नेपाल एयरलाइन्सको भाडामा मनपरी, सीताले यात्रु बोक्नै छोड्यो
काठमाडाैं । नेपाल एयरलाइन्स जहाजका कर्मचारीकै मनपरि उडनले गर्दा यात्रुहरुले सास्ती खेप्नु परेको छ । नेपालगञ्जस्थित नेपाल एयरलाइन्सको कार्यालयले…
टेकुमा उपचाररत दुई जनाको दोस्रो रिपोर्ट पनि पोजेटिभ 30 views
अमेरिकामा एकैदिन ९ सय बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या २ लाख नाघ्यो 28 views
काठमाडौं क्षेत्र नं १ का प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठको भिडियो सर्वाजनिक, काठमाडौंका जनताले खानेपानी पाएन ? 21 views
ससुरा बा ! (कथा) 19 views